Hebhere 7: 7 - "Ngaphandle kwembuzo, umntu onamandla okunika intsikelelo mkhulu kuneyona insikelelweyo." (NLT)
Isifundo Esivela KwiZibhalo: UmSamariya Olungileyo kuLuka 10: 30-37
Ininzi intsha engamaKristu ivile inqaku elithi "UmSamariya olungileyo," kodwa eli binzana livela kumzekeliso ochazwe nguYesu kuLuka 10. Kwimbali umhambi ongumYuda uhlaselwa ngokugqithisileyo ngamagundane. Umbingeleli nomncedisi wetempile babedlula loo ndoda, benza lutho.
Ekugqibeleni, kwafika indoda yaseSamariya kuye, yabopha amanxeba kwaye yalungiselela ukuphumla nokubuyiselwa kwindlu yokulala yasekhaya. UYesu usitshela ukuba indoda yamaSamariya yayingummelwane kumntu ongumYuda kwaye ibe yinto yokubonisa abanye inceba.
Kubaluleke kakhulu kwibali lomSamariya olungileyo. Siyalelwe ukuba sithande abamelwane bethu njengathi ngokwethu. Ngeli xesha uYesu waxelela ibali lakhe, iinkokeli zonqulo zazisongelwa "kuMthetho" ukuba babekekele eceleni imfesane yabo kwabanye. UYesu wasikhumbuza ukuba imfesane nenceba ziyimpawu ezibalulekileyo. AmaSamariya ngelo xesha ayethandwanga, kwaye ahlala ephathwa kakubi, ngamaYuda. UmSamariya olungileyo wabonisa ububele obukhulu kumYuda ngokuzimisela ukuphindezela okanye ukudelela ekuncedeni umntu olimazayo. Siphila kwihlabathi elinomsebenzi onzima ukubeka bucala okanye ukuphazamiseka kwangaphambili ukunceda omnye umntu.
Ububele isisityalo onokuyakhela kuso, kwaye sisiqhamo esithatha umsebenzi omningi.
Intsha engamaKristu inokubanjwa ngokulula kwimisebenzi yemihla ngemihla kunye nomsindo kwabangewona amaKristu ukulibala indlela yokuba nomusa komnye nomnye. Inyebo yindlela enye intsha yamaKristu ayiyikuyijonga ngayo isi siqhamo somoya, kuba kungabonakali ngathi kuninzi, kodwa loo mazwi alula kunye namabali angaba yingozi.
Kulula ukuba nomusa kulabo abathandayo nalabo abathanda wena. Kanti uzimisele ukubeka uxolo lwakho ngaphandle kokuncedisa umntu ongeke abe nomusa ngokubuyisela? UYesu usitshela ukuba simele sibabonise inceba kubo bonke ... kungekhona nje abantu esiyithandayo.
Isipho esingokomoya sobubele akufanele sithathwe ngokulula. Akulungele ukuba nomusa kuwo wonke umntu, kwaye kukho imeko ezininzi apho kuthatha inzame enkulu. Nangona kunjalo, intliziyo enentliziyo yenza okungakumbi ukubonisa uThixo kwabanye kunamagama aphuma emilonyeni yethu. Izenzo zithetha ngokugqithiseleyo kunamazwi, kwaye izenzo zenceba zithetha iimvanoveli malunga nendlela uThixo asebenza ngayo ebomini bethu. Ububele yinto ebangela ukukhanya kwabanye kunye nathi. Ngethuba sitshintsha abanye ubomi ngokuba nomusa kubo, senza impilo yethu yokomoya ibe ngcono.
Cela uThixo ukuba abeke ububele nenceba entliziyweni yakho kule veki. Khawubhekisise ngakumbi abo bangakucongi kakuhle okanye baphathe kakubi abanye baze babuze uThixo ukuba aninike intliziyo inenceba nomoya onobubele kwabo bantu. Ekugqibeleni inceba yakho iya kuvuna isiqhamo sobubele kwabanye. Khangela intliziyo yakho njengoko ubonisa ububele kubo abakujikelezile, kwaye ubone indlela ozalisekisa ngayo isibhalo.
Kuyamangalisa ukuba isenzo somusa singasiphakamisa njani imimoya yethu. Ukuba nomusa kwabanye kungabancedi nje kuphela, kodwa kuya kude ukuphakamisa umoya wethu, naye.
Isingeniso kwiNcwadi yeGenesis
Konke malunga nePinocytosis kunye nokusela kwamaseli
UYokebhedi - Unina kaMoses
Iimbali ezimbini ezidlulileyo zaseJamani kunye nendlela yokuzisebenzisa
Ibhola lebhola lebhoksi 101
Iintetho Zosuku Lukukhunjulwa
Iyiphi i-Wild Card kwiTennis?
5 Iingenelo zeendaba zeBhedtime (kubantwana bazo zonke iAges)
8 Amazwe Ayenokuvuvukala Kwe-Arab Spring
IYunivesithi yase-Iowa GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Uhlu lwe-Lanthanides lwezinto zezinto
I-Bowen's Reaction Series
Imifanekiso yeCuster yaseGeorge Armstrong kunye neNkqaso yakhe yokugqibela yaba yi-Iconic